Adeegga Fotona4Dpro ee ugu Fiican iyo Bixiyaha | Hongyu
Khadka SP ee Fotona ee nidaamyada leysarka waxaa loogu talagalay inay fuliyaan dhammaan daaweynta bilicda weyn. Isku-darka laba mowjadood oo is-dhammaystiran oo is-dhammaystiran Fotona SP lesers-ku waxay u shaqeeyaan qaabab aad u badan, nidaamyo ujeedo badan leh oo fulin kara codsiyo aad u ballaadhan oo ku saabsan bilicsanaanta, qalliinka iyo dhakhtarka dumarka. Fotona's Nd: Dhererka mowjadda YAG wuxuu wax ku ool u yahay in la gaaro lakabyada ugu qoto dheer ee maqaarka, halka Er: YAG ee mowjadda dhererku ay ku habboon tahay in laga fogeeyo cilladaha dusha si loo muujiyo muuqaal soo jiidasho leh, natiijooyin waara.
Daawooyinka Quruxda Waxqabadka Ugu Sarreeya
Heerka dahabka ee Fotona Nd: YAG tikniyoolajiyadda laser -ku waxay bixisaa awoodda iyo waxqabadka loo baahan yahay si loo maareeyo codsiyo kala duwan oo bilicsanaanta, laga bilaabo dib -u -soo -nooleynta maqaarka iyo timaha dhimista finanka, daaweynta xididdada dhiigga iyo waxyaabo kaloo badan. Nd: YAG laser oo ku jira khadka SP wuxuu taageeraa xawaaraha sare ee Fotona L-Runner Pro iyo S-11 Nd: Sawirka YAG loogu talagalay xawaaraha habsocodka ugu dambeeya, nabadgelyada iyo hufnaanta daawaynta aagga ballaaran. Waxaa intaa dheer, qaabka Fotona PIANO ee kacaanka cusub ee kacaanka ah wuxuu awood u siinayaa inuu si qoto dheer u dhex galo Nd: YAG kululaynta jumlada iyada oo isla mar ahaantaana la ilaalinayo epidermis-ka nabdoon oo raaxo leh.
Khadka SP wuxuu kaloo sii daayaa awoodda jiilka 3aad Er: YAG dib-u-soo-kicinta maqaarka laser, oo leh hufan, xakamaynta ka-saaridda lakabka-micne-ka. Iyada oo leh shaqooyin u dhexeeya min dusha sare ilaa diirka qoto dheer, laga bilaabo kuwa aan ablative ahayn ilaa si buuxda u abbaarta iyo min-buuxa ilaa dib-u-soo-nooleynta jajabka, daaweynta waxaa lagu hagaajin karaa xaalad kasta oo maqaarka gaar ah si loo gaaro natiijooyin aan caadi ahayn. Xalalka Patent -ka ah sida farsamada VSP (Variable Square Pulse) iyo qaabkii ugu dambeeyay ee Fotona SMOOTH mode ayaa ah qaar ka mid ah astaamaha ka dhigaya khadka SP inuu yahay goynta Er: YAG technology.
Qaabka QCW ee Codsiyada Qalliinka
Ka sokow wax -qabadkeeda sare ee infrared -ka Er: YAG iyo Nd: YAG laser -ka, khadka SP waxaa sidoo kale ku jira mid ka mid ah infrared -ka ugu awoodda badan QCW (Quasi Continuous Wave) Nd: YAG qalliinnada qalliinka ee suuqa. Iyada oo gacmo -gacmeedyada qalliinka ee Fotona si gaar ah loo qaabeeyey, khadka SP wuxuu bixiyaa astaamaha waxqabadka ugu habboon iyo isku -darka mawjadda infrared -ka ee kala duwan ee xulashada daaweynta qalliinka oo aad u ballaaran.
QCW Nd: Dhererka mawjadda YAG wuxuu ku habboon yahay baaxad ballaadhan oo ah codsiyada qalliinka, laga bilaabo goynta saxda ah iyo goynta nudaha illaa hababka endo ee horumarsan, sida lipolysis laser, ablation endovenous laser, iyo inbadan. Dheeraadka Er: Dherarka dhererka YAG wuxuu awood u siinayaa in si qumman u goynta qalliinka, iyada oo aan lahayn nabaro ama tolmo. Daaweyntu way ka dhakhso badan tahay oo ka dhib yar tahay farsamooyinkii hore, iyo is-dhexgalka saaxiibtinimo ee khadka SP-ga iyo kaydinta xusuusta la hagaajin karo ayaa ka dhigi doonta hawl kasta oo dhakhtar qalliin mid fudud oo walaac yar.
Ikhtiyaariyada Ikhtiyaarka ee Haweenka
Fotona's SP lasers-ka waa xiddigle jilaayaal ku takhasusay cilmiga cudurada dumarka iyada oo ay ugu mahadcelinayaan awoodooda la xaqiijiyay in ay sameeyaan waxyaalo aad u fiican oo aan xiriir lahayn, habraacyo aan duullaan lahayn oo leh raaxo bukaan oo aad u weyn, dhimista dhimista iyo bogsashada degdegga ah. The Er: YAG laser -ku aad buu waxtar ugu leeyahay daaweynta nabarrada qoorta iyo siilka, iyo sidoo kale dhaawacyada HPV, midabaynta iyo neoplasias. Sababtoo ah awoodiisa jeermiska ee gaarka ah waxaa xitaa loo isticmaali karaa unugyada cudurka qaba. The Nd: YAG dhererka hirarka laser waxaa loo isticmaalaa qalliinka unugyada jilicsan, sida laparotomy, laparoscopic iyo hababka hysteroscopic, iyo sidoo kale hababka dumarka ee qurxinta. Wadajir ahaan, dhererka hirarka laser -ka ee kaabayaasha ah ee SP ayaa awood u siinaya fursado badan oo daaweyn ah, oo ay ku jiraan habab dhammaystiran oo si wax ku ool ah loogu bogsado dhibaatooyinka dumarka ee ugu badan.
Loogu farsameeyay Fududeynta Isticmaalka
Ku guuleysta dhammaystirka natiijooyinka kiliinikada adiga oo ku raaxeysanaya xawaaraha iyo hufnaanta aan la jaanqaadi karin: khadka SP wuxuu soo bandhigayaa dareen leh, si sahlan loo adeegsan karo oo leh astaamaha xusuusta la beddeli karo si looga caawiyo dhakhaatiir kasta inuu si dhakhso leh oo waxtar leh u shaqeeyo. Gacmo-gacmeedyo si xirfadaysan loo qaabeeyey, qaabab hawlgal oo si sahlan loo xulan karo iyo astaamo kale oo horumarsan oo dheeraad ah ayaa sii wanaajinaya saxnaanta iyo waxqabadka nidaam kasta oo Fotona laser ah oo loogu talagalay wax-ku-oolnimada bukaan-socodka iyo xakamaynta aan la barbardhigi karin inta lagu jiro daaweynta.
Laba Nooc oo Laga Doorto
SP Dynamis waa nidaam si gaar ah u karti iyo sifiican u leh oo bixiya awoodda waxqabadka ugu sarreeya ee warshadaha Er: YAG iyo Nd: YAG laser, oo loogu talagalay codsiyada baaxadda ballaaran ee bilicsanaanta iyo maqaarka. SP Dynamis sidoo kale waxaa ku jira qalliin dheeraad ah QCW Nd: YAG laser oo loogu talagalay ka -goynta laser -ka edovenous, lipolysis, iyo hababka kale ee qalliinka.
SP Spectro -nooc aad u cufan oo ka awood yar SP Dynamis, SP Spectro wuxuu bixiyaa isla teknolojiyadda casriga ah ee Er: YAG iyo Nd: YAG tiknoolijiyada laser (oo leh QCW qalliin oo ikhtiyaar ah QD Nd: YAG) oo aad u horumarsan oo karti leh xirmo loogu talagalay in lagu bixiyo daaweyn bilicsanaanta oo dhammeystiran qiimo gaar ah.
*QCW waa heer leh SP Dynamis iyo ikhtiyaar leh SP Spectro.